အို ကင်းစောင့်၊ ညဉ့်အမှုကား အဘယ်သို့နည်း၊၊ | Watchman, What of the Night? | Real Conversion
အို ကင်းစောင့်၊ ညဉ့်အမှုကား အဘယ်သို့နည်း၊၊
လော့စ်အိန်ဂျယ်လိတ်မြို့၊ တဲတော်နှစ်ခြင်းအသင်းတော်၊ သခင်ဘုရားနေ့၊ နံနက်ပိုင်းဝတ်ပြုအစည်းအဝေး၌ ဟောကြားသောဒေသနာတော်၊
“ဒုမာပြည်နှင့်ဆိုင်သော ဗျာဒိတ်တော်ကား၊ အိုကင်းစောင့်၊ ညဉ့်အမှုကား အဘယ်သို့နည်း။ အိုကင်းစောင့်၊ ညဉ့်အမှုကား အဘယ်သို့နည်း။ ကင်းစောင့်ကလည်း နံနက်သည်လာ၏။ ညဉ့်လည်းလာ၏။ သင်တို့သည် မေးမြန်းလိုလျှင် မေးမြန်းကြ။ ပြန်သွားကြ။ တဖန် လာကြဟု ဆိုလေ၏” (ဟေရှယ ၂၁း၁၁၊၁၂)။
“ဒုမာ”ဟူသောစကားလုံးသည် ဧဒုန်ကိုဆိုလိုသည်။ ဧဒုန်လူတို့သည် ကြောက်ရွံ့ခြင်းနှင့် ပြဿနာဒုက္ခဝန်ထုပ်ဝန်ပိုး ပိနေကြသည်။ ထိုသူတို့က ပရောဖက်ဟေရှာယအားဖြင့် “အို ကင်းစောင့်၊ ညဉ့်အမှုကား အဘယ်သို့နည်း။ ညဉ့်အမှုကား အဘယ်သို့နည်း”ဟု ဟစ်အော် ခဲ့ကြသည်။ ဒဗလှူ၊အီး၊ ဝိုင်ပြောကြားခဲ့သည်မှာ ၊ “ကင်းစောင့်ဟူသည် ဘုရားရှင်နှင့်အတူ ရှိသောသူ၊ ဖြစ်ပျက်လာမည့်အကြောင်းအရာကို သိသောသူ၊ ကင်းမျှော်စင်၌နေ၍ ဘုရားသခင်နှင့်မိတ်သဟာယဖွဲ့နေသောသူ” ဟူ၍ပြောခဲ့သည်။ (Isaiah: Prophecies, Promises, Warnings, page 14).
ယနေ့ ကျွန်ုပ်တို့ခောတ်တွင် “ကင်းစောင့်”တို့သည် မရှိသလောက် ရှားပါး နေပါပြီ။ လွန်ခဲ့သောညက “ပရောဖက်ပြုရာ ကျွမ်းကျင်သူ” ဟလ်လင်ဆေးကို တီဗွီဖန်သားပေါ်တွင် တွေ့ခဲ့သည်။ ထိုတရားပွဲ၌ လာသောဧည့်သည်တစ်ဦးက ကျွန်ုပ်တို့ သည် ကျွန်ုပ်တို့ ဒုက္ခပြဿနားအရင်းအမြစ်အကြောင်း နားလည်ဖို့ ရောမဩဝါဒစာကို ဖတ်ရှုနေမည့်အစား ဗျာဒိတ်ကျမ်းကို လေ့လာဖတ်ရှုဖို့လိုနေပြီဟု ပြောကြားခဲ့သည်။ ဟလ်လင်ဆေးက ထိုသူ၏ အဆိုကို လက်ခံခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်အတွက်ကား ထိုသို့ ကျွန်ုပ်တို့အသင်းတော်နှင့် ယဉ်ကျေးမှုအတွက် ၎င်းအဆိုသည် အတွေးတိမ်၊ ညာဏ်တိမ် သော အဆိုသာဖြစ်သည်ဟု ထင်သည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်အမှန်တရားဖြစ်သည်။ ဗျာဒိတ် ကျမ်းသည် အလွန်အရေးကြီးသော ကျမ်းစာအုပ်ဖြစ်သလို၊ ဒီကနေ့အတွက် ရောမဩဝါဒစာအုပ်သည် အဓိကကျသောကျမ်းဖြစ်သည်။ဍ ဖော်ပြ၍မကုန်နိုင်သော လူထုသန်းနှင့်ချီသော မယုံကြည်သူများ ကျွန်ုပ်တို့ အသင်းတော်များ၌ ရှိနေကြသည်။ ထိုသူတို့အဖို့ ရောမဩဝါဒစာကို အထူးသင်ကြား ရမည်ဖြစ်သည်။ ထိုကျမ်းကို မသွန်သင်ပါက ထိုသူတို့အမှန်လိုနေသော ကယ်တင်ခြင်းကို မည်သို့ကူညီနိုင်မည်နည်းဍ “ပရောဖက်ပြုရာ၌ ကျွမ်းကျင်သု”တို့ပင်လျှင် “ကင်းစောင့်”အမှု၌ အရည်အသွေးမမှီကြ။ အကြောင်းမှာ စာတန်မာရ်နတ်၏ ဖျက်ဆီးခြင်းအမှုသည် အသင်းတော်ထဲ၌ အမှန်တကယ် “အပေါ်ယံခရစ်ယန်”များရှိနေသည်ကို မသိနားမလည်ကြ၍ ဖြစ် သည်။
ဧဒုန်အမျိုးခေါင်းဆောင်များသည် ယနေ့ခရစ်ယာန်များထက်ပင်၊ ပညာတရား ရှိခဲ့ကြသည်။ ထိုသူတို့သည် အပြစ်”ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုး”ကို သိနားလည်ခဲ့ဟန်ရှိသည်။ တရားစီရင်ခြင်းကျဆုံးခြင်းကို သိနားလည်ခဲ့ကြသည်။ ထို့ကြောင့် မှန်သောပရောဖက် ဟေရှာယကို “ကင်းစောင့်”ဟူ၍ ခေါ်ဝေါ်ခဲ့ကြသည်။
“အိုကင်းစောင့်၊ ညဉ့်အမှုကား၊ အဘယ်သို့နည်း၊ အိုကင်းစောင့် ညဉ့်အမှုကား အဘယ်သို့နည်းဍ (ဟေရှာယ ၂၁း၁၁)။
ထိုသူတို့သည် အနာတရဖြစ်နေသော လူနာပမာ ဟစ်အော်ခဲ့ကြသည်။ ဝေဒနာခံစားနေသော လူနာပမာ” ညတာရှည်လွန်းလှသဖြင့် မည်မျှကြာဦးမည်နည်း၊ ဟူ၍ အော်ဟစ်ခဲ့ကြသည်။ (NIဠ )။ ပရောဖက်၊ ကင်းစောင့်က၊ “နံနက်သည်လာ၏။ ညဉ့်လည်း လာ၏”ဟူ၍ ဖြေကြားခဲ့သည်။
အဘယ်ကြောင့်ထိုသူတို့သည် ဟေရှာယထံသွားခဲ့ကြသနည်း၊ ဧဒုန်ပြည်၌ လည်း နတ်ခက်ဗေဒပညာရှင်များ မရှိ၍ဖြစ်မည်လား၊ အဘယ်ကြောင့် ပြင်းထန်စွာ ငိုကြွေးကြလျှက် ယေရုရှလင်မြို့သို့ သွားခဲ့ကြသနည်း၊ လူသားတို့သည် အခြေအနေ သာယာနေခိုက်တွင် အနာဂါတ်ဟောကြားသောသူတို့ထံသို့ သွားကြသည်။ သို့သော် သေခြင်းနှင့်ပြင်းထန်သော ပြစ်ဒါဏ်မှလွတ်ဖို့ အဘယ်မည်သောသူတို့သည် နတ်ကတော် ထံ၊ နတ်ခက်ဗေဒပညာရှင်ထံ သွားလိုမည်နည်း၊ သေခြင်း နှင့်ရင်ဆိုင်တော့မည့်ခဏတွင် ကျွန်ုပ်တို့သည် လောကပညာရှင်တို့ထံသို့ မသွားလို ကြတော့ပါ။ ဘုရားသခင် မိန့်ကြားသံကိုသာ နာကြားလိုကြသည်ဍ ဗေဒင်ဆရာ၊ နတ်ခက်ဗေဒပညာရှင်တို့က မိမိဘ၀ကောင်းစားရေးကိုသာ ဟောပြောတတ်ကြသည်။ သေခြင်းနှင့်အပြစ်စီရင်ခြင်း ကျရောက်သောအခါ လူတို့သည် မကြာခဏဘုရားလူကိုသာ ရှာဖွေခဲ့ကြသည်။
“အိုကင်းစောင့်၊ ညဉ့်အမှုကား အဘယ်သို့နည်း၊ အိုကင်းစောင့် ညဉ့်အမှုကား အဘယ်သို့နည်း၊ (ဟေရှာယ ၂၁း၁၁)။
ဒီကနေ့ ၎င်းကျမ်းပိုဒ်က ကျွန်ုပ်တို့အား အဘယ်သို့ပြောလိုနေသည်ကို ကရုတ စိုက်နားထောင် စဉ်းစားကြည့်ပါဍ
၁။	ပထမ၊ သမ္မာကျမ်းစာတော်က တိုင်းနိုင်ငံအားလုံးကို ပြောဆိုနေသည်။
၁၉၁၄ ခုနှစ်၊ ပထမကမ္ဘာစစ်ပွဲစတင်နေပြီ၊ သခင်အက်ဝပ်ဒ်ဂရေးသည် အတိုင်ပင် ခံများနှင့် တညလုံးဆွေးနွေးတိုင်ပင်ပြီး ၎င်းအခန်းမှ ထွက်လာခဲ့သည်။ သူသည် ဗြိတိန်နိုင်ငံ၏ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးတစ်ဦးဖြစ်သည်။ နံနက်စောစောတွင် သခင် အက်ဝပ်ဒ်သည် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခန်းထဲက အခြားသူတစ်ဦးနှင့် ထွက်လာခဲ့သည်။ ထိုသူတို့သည် စစ်ပွဲနှင့် ပါတ်သက်ပြီး တညလုံးဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီးဖြစ်သည်။ ထိုစဉ် လျှပ်စစ်မီးမရှိသေးသဖြင့် မီးအိမ် ကလေးဖြင့် သွားလာခဲ့ကြသည်။ သခင်အက်ဝပ်ဒ်တို့ သွားလာအလုပ်ရှုပ်နေကြသဖြင့် မီးအိမ်ကိုင်ဆောင်သူလည်း ဟိုဟိုဒီဒီလိုက်ပါ မီးအလင်း ထွန်းပေးရသည်။ သခင်အက်ဝပ်ဒ်က သူ့သူငယ်ချင်းကို ပြောခဲ့သည်မှာ “မီးအိမ်တို့သည် ဥရောပတခွင်၌ ရောက်ကုန်တော့မည်၊ ကျွန်ုပ်တို့အသက်ရှင်စဉ် နောက်ထပ်တစ်ခါ ဒီမီးအိမ်တွေကို တွေ့ရတော့မည်မဟုတ်တော့ဘူး” ဟူ၍ ပြောခဲ့သည်။ ထိုပြောစကား အမှန်ပင်ဖြစ်သည်ဍ မကြာမှီ ရုရှားနိုင်ငံသည် ကွန်မြူနစ်လက်ထဲ ရောက်သွားခဲ့သည်။ ဂျာမနီနိုင်ငံသည်လည်း ဟစ်တလာ၏ ညှင်းပန်းနှိပ် စက်မှုအောက် ရောက်ရှိသွားခဲ့ပြီ။ အီတလီသည်လည်း မူဆောလီနိလက်အောက် ရောက်ခဲ့ပြီ။ ပြင်သစ်နှင့် အင်္ဂလန် နိုင်ငံသည်လည်း ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပွဲ၌ အင်အားနည်းလာပြီဖြစ်သည်။ ထိုသို့သော နိုင်ငံတိုင်းသည် မိမိတို့၏ပထမကနဦးဂုဏ် မထွန်းတောက်နိုင်တော့ပြီ။ ဥရောပ ကမ္ဘာသည်လည်း ဘယ်တော့မှ ရှေ့ယခင်ဂုဏ်သိက္ခာ ဆယ်နိုင်တော့မည်မဟုတ် တော့ပါ။
ယခုဆိုလျှင် မီးအိမ်သည် မူဆလင်တို့လက်ထဲ စတင်ဝင်ရောက်စီးဆင်းနေလေပြီ။ အမေရိကန်လည်း သေလုနီးပါး ဖြစ်နေပေပြီ။ အိမ်ဖြူတော်က ဆိုးသွမ်းမိုက်မဲမှုက မှားယွင်းသောလမ်းကို ပြညွှန်နေပေပြီ။ ရီဘတ်ပလီကန်အဖွဲ့ အနိုင်ယူပြီး အုပ်ချုပ်ပါစေ၊ ကျွန်ုပ်ဇနီးနှင့် ကျွန်ုပ်တို့နှစ်ယောက်သည် လွန်ခဲ့သောနှစ်ပတ်လောက်က သမ္မတ နစ်ခ်စ္စန်၏ မွေးရပ်မြေစာကြည့်တိုက်၌ အန်းဘောက်တာ၏မိန့်ခွန်းကို ကြားနာခဲ့သည်။ လူထုပရိသတ်တို့ ကလည်း စိတ်ဝင်တစား နားထောင်ခဲ့ကြသည်။ “တည်ငြိမ် ရင့်ကျက်နေသော သမ္မတ နစ်စ်စွန်ထက်ပင်နေသယောင်း၊ “Hippie” နည်းတူ ရှည်လျားသောစာတမ်းကို ဖတ်ကြားခဲ့ သည်ကိုတွေ့ရသည်။ ကျွန်ုပ်ကလည်း ကျွန်ုပ်၏ ဇနီးအား “ဤသည်ကန်ဆာဗေး တစ်ဖြစ်သည်၊ အိုအဖဘုရားရှင် ကယ်မသနားတော်မူပါ” ဟူ၍ပြောကြားခဲ့သည်။
အမေရိကန်နိုင်ငံသည် တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးနေအုံးမည်ဟု သင်ထင်ပါသလား၊ ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ ဒီမိုကရက်တစ်အမျိုးသားပါတီ အစည်းအဝေးပွဲကြီးအကြောင်း နားထောင်ကြည့် သောအခါ ကျွန်ုပ်တို့အတွက် ဘာဆိုဘာမှ မျှော်လင့်စရာ မတွေ့ခဲ့ရပေဍ ရှုပ်ထွေးမှုများစွာ ရှိနေမည်။ ဘီလီဂရေဟမ်က “ငါ၏မျှော်လင့်ခြင်း”ဟူသော ခေါင်းစဉ်ဖြင့် အသံ လွှင့်ရာတွင်လည်း “ကျွန်ုပ်တို့အတွက် ဘာမှ မျှော်လင့်စရာ မတွေ့ရပေ” ထိုဆရာကြီး အသက်အရွယ် ကြီးရင့်နေလို့ အတွေးခေါင်နေ၍လား၊ မဖြစ်နိုင်ပေ။ အကြောင်းမှာ သူ၏တရားဒေသနာတော်သည် ဝိညာဉ်ရေးရာ၌ ကျဆင်းနေသော ကျွန်ုပ်တို့ တိုင်းပြည်ကိုကယ်တင်နိုင်ဖို့ အလွန်ပင် ရှုပ်ထွေးစေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဘီလီ ဂရေဟမ်၏ တရားဒေသနာတော် များစွာတို့သည် အထူးသဖြင့် ထိထိမိမိ ပြောဟောတင်ဆက်ခဲ့ဖူးသည်။ “အကယ်၍ ဘုရားရှင်က အမေရိကန်နိုင်ငံကို တရားမစီ ရင်ဘူးဆိုလျှင် ကိုယ်တော်သည် သောဒုံမြို့နှင့်ဂေါမရမြို့တို့ကို တောင်းပန် ရလိမ့်မည်” ဟူသော တရားဒေသနာတော်ကို ဟောဖူးခဲ့သည်။ သမ္မာကျမ်းစာတော်၌ လာသည်ကား
“မတရားသောသူတို့နှင့် ဘုရားသခင်ကို မေ့လျော့သောလူမျိုးများ အားလုံးတို့သည် မာရဏနိုင်ငံသို့ နှင်ခြင်းကို ခံရကြလိမ့်မည်”
ကျွန်ုပ်ထုတ်ဝေခဲ့သော “ Preaching toaDying Nation “ ဟူသော စာအုပ်မှာ ယူဖို့ လူတဦးကျွန်ုပ်ထံ လွန်ခဲ့သောအပတ်က ဖုန်းဆက်မေးမြန်းခဲ့သည်။ ထိုသူပြောကြား ခဲ့သည်မှာ “ဆရာဟောထားတာ အရမ်းကိုမှန်တယ် ကျွန်ုပ်တို့နိုင်ငံသည် သေလုမျှောပါး ဖြစ်နေပြီး” ဟူ၍ ပြောကြားခဲ့သည်။ ထိုသူတို့သည် ကန်ဆက်ပြည်နယ်၊ ဝေးလံသော တောရွာကလေးက သေးငယ်လွန်းသဖြင့် ပြည်သူ့ရဲစခန်းပင်မရှိဘူးဟူ၍ ပြောခဲ့သည်။ လွန်ခဲ့သောဆယ်နှစ်လောက်တုန်းက မြို့ပတ်ဝန်းကျင်တွင် တစ်နှစ်ကို နှစ်ကြိမ်သုံးကြိမ် ခန့်သာ ရဲကား လှည့်လည်ရောက်ရှိခဲ့ဖူးသည်၊ “အခုဆိုလျှင် တနေ့ကို နှစ်ကြိမ်သို့မဟုတ် သုံးကြိမ် တနေ့ကိုလာရောက်လှည့်လည်လာနေကြသည်” ဟူ၍ ပြောကြားခဲ့သည်ဍ ပြီးနောက် ထိုလူအား ကျွန်ုပ်အား ဆရာတို့မြို့အသင်းတော်ထဲက အသင်းသား ဘယ်နှစ်ယောက်လောက် အရက်သေစာကို သောက်ခဲ့ကြသနည်းဟု မေးမြန်းခဲ့သေး သည်။ ထိုလူ ပြောခဲ့သည်မှာ လူတစ်ဦးချင်းစီ ကယ်တင်ခြင်းရရှိဖို့လိုနေသည်ဟု ပြောခဲ့သည်။ ထိုလူ ပြောကြားပြန်သည်မှာ “လူတစ်ဦးက ကျွန်ုပ်ကယ်တင်ခြင်း ရပါပြီ”ဟူ၍ မူးကြောင်ကြောင်နှင့် ပြောခဲ့၏။ နတ်ဆိုးပူးထားသဖြင့် မျက်လုံးနီရဲ သည်အလား အရက်မူးနေသော ဧဝံဂေလိကယ်အသင်းသားတစ်ဦးဖြစ်နေသည်။ဍ ကျွန်ုပ်တို့ အသင်းတော်တွင် အနယ်နယ်အရပ်ရပ်မှ ဧဝံဂေလိအသင်းသားများဖြင့် ပြည့်နှက်နေပါပြီဍ ပရောဖက်ဒံယေလအချိန်အခါတုန်းကကဲ့သို့ ဖြစ်နေသည်
“ကိုယ်တော်၏နိုင်ငံကို ဘုရားသခင်ရေတွက်၍ ဆုံးစေတော်မူ၏။ ကိုယ်တော်ကို ချိန်ခွင်နှင့်ချိန်၍ လျော့ကြောင်းကိုတွေ့မြင်တော်မူ၏” (ဒံယေလ ၅း၂၆-၂၇)
ဘုရားသခင်၏ အမျက်တော်ကျရောက်တော့မည့် တိုင်းနိုင်ငံ၌ သင်နေထိုင်မည် ဆိုလျှင် သင်မည်သို့ စိတ်ခံစားမည်နည်း၊ ကျိန်ခြင်းကျရောက်သည့် တိုင်းနိုင်ငံဖြစ်သဖြင့် ဤသို့ ပျက်ဆီးခြင်းကို သင်ခံစားရမည်ဍ ရေခဲတောင်နှင့် သင်ဝင်မတိုက်သေးခင်က တီးမှုတ်ဖျော်ဖြေ ကခုန်လျှက် အရက်မှူးနေသူတို့က ကြည့်နေသည်ပမာ ခံစားရမည်ဍ သို့ဖြစ်၍ အိုဘားမား၏ နိုင်ငံသည်လည်း ဖျက်ဆီးခြင်းနှင့် တွေ့ကြုံတော့မည်ဍ တနင်္ဂနွေနေ့ ဝတ်ပြုအစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်ဖို့ တစ်ဦးတစ်ယောက်မှ မအားကြ တော့ပေ။ တဦးတယောက်ကမှ အပြစ်သဘော နားမလည်ကြတော့ဘူး။ တဦး တယောက်ကမှ စိတ်နှလုံးသဖြင့် ခရစ်တော်ကို မရှာဖွေကြတော့ဘူး။ မည်သည့် တစ်ဦးတစ်ယောက်ကမှ ဘုရားကို မကြောက်ကြတော့ဘူး။ သမ္မာကျမ်းစာ မိန့်တော် မူသည်ကား၊ “ ဘုရားသခင်ကို ကြောက်ရွံ့ခြင်းအကြောင်းသည် သူတို့မျက်စိ၌ မထင်ဟု ကျမ်းစာလာသတည်း” (ရောမ ၃း၁၈)၊ တဖန်မိန့်တော်မူသည်ကား “နားလည်သောသူမရှိ၊ ဘုရားသခင်ကို ရှာသောသူမရှိ” (ရောမ ၃း၁၁)။
“အို ကင်းစောင့်၊ ညဉ့်အမှုကား အဘယ်သို့နည်း၊ အို ကင်းစောင့်၊ ညဉ့်အမှုကား အဘယ်သို့နည်း၊ (ဟေရှာယ ၂၁း၁၁)
“ငြိမ်ဝိပ်ခြင်းရှိ၏၊ ဘေးအန္တရာယ်နှင့်ကင်းလွှတ်၏ဟုဆိုစဉ်တွင်... သူတို့အပေါ်၌ လျှင်မြန်စွာသောပျက်စီးခြင်းရောက်၍ လွတ်ခြင်း အခွင့်မရှိရကြ” (၁သက် ၅ ; ၃)
အမေရိကန်နိုင်ငံသည် ပျက်စီးတော့မည်၊ ဒီကနေ့မနက် တက်ရောက်လာကြသော ဓမ္မမိတ်ဆွေများလည်း ထိုပျက်စီးခြင်းကို တွေ့ကြမှာမလွဲပေဍ ကဗျာဆရာ ဂျိမ်းရက် ဆယ်လ် လောဝေလ် (၁၈၁၉-၁၈၉၁) သီကုံးခဲ့သည်မှာ၊
(၁၈၁၉-၁၈၉၁ ခုနှစ် ဂျိမ်းရောဆေလ်လောဝေလ်သီကုံးသော လူတိုင်း၊ တိုင်း နိုင်ငံတိုင်း)။
အမေရိကန်နိုင်ငံသည် ဝိညာဉ်ဆိုးလမ်းကို ရွေးချယ်သဖြင့် စာသင် ကျောင်းချိန် ဆုတောင်းခြင်းကို ဖယ်ရှားလိုက်ပြီဖြစ်သည်။ အမေရိကန်နိုင်ငံသည် ဝိညာဉ်ဆိုးလမ်းသို့ လိုက်သဖြင့် စာသင်ကျောင်းများ၌ ကျမ်းစာသင်ကြားခြင်းကို ဖယ်ရှားပစ်ခဲ့ပြီ ဖြစ်သည်။ အမေရိကန်နိုင်ငံ ဝိညာဉ်ဆိုးလမ်းသို့လိုက်သဖြင့် ရုပ်ရှင်ရုံများ၌ ညစ်ညမ်း သောအခွေများကို ပြသခွင့်ပြုလိုက်ပြီဖြစ်သည်။ အမေရိကန်နိုင်ငံသည် ဝိညာဉ်ဆိုးများ နောက်လိုက်သဖြင့် သန်းနှင့်ချီသော ကလေးသူငယ်များကို ဆားငံပင်လယ်ရည်၌ ပြုတ်ပြီး အသေသတ်ပစ်ခဲ့ကြပြီ။ ၎င်းကျူးလွန်ခြင်းကို တစ်နှစ်နှစ်နှစ်အတွင်း၌သာ တားမြစ်နိုင်ခဲ့ပြီး ဆက်လက်၍ ဆိုးသွမ်းမိုက်မဲမှုကို ခွင့်ပြုခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ ယခုဆိုလျှင် ၎င်းတိုင်းနိုင်ငံသည် အသွေး၊ Uကလေးငယ် တို့၏အသွေးစွန်းခြင်းနှင့် ပြည့်နှက်နေပြီ ဖြစ်သည်။ တီဗီဖန်သားမျက်နှာပြင်တွင်လည်း စုန်းကဝေ၊ နတ်ဆိုးများအကြောင်း ပြသနေ သည်ကို သင်အံ့အားသင့်ခဲ့ဖူးပါသလား၊ ၎င်းသတ်ဖြတ်မှုကို သေနတ်ဖြင့် ကျူးလွန်ခဲ့ခြင်းမဟုတ်ဍ ထိုသို့ကျူးလွန်ခဲ့ခြင်းမဟုတ်ပါဍ အမေရိကန်သား တို့သည် မူးယစ်ဆေးဝါးဖြင့်၎င်း၊ ညစ်ညမ်းသောဗီဒီယိုဂိမ်းဖြင့်၎င်း၊ ညစ်ညမ်း သောရုပ်ရှင် ကားများဖြင့်၎င်း သတ်ဖြတ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် တနင်္ဂနွေနေ့များတွင် ထုံးတမ်းစဉ်လာ သန့်ရှင်းစင်ကြယ်ခြင်းဝတ်ကို မယ်တော် ရှေ့၌သာ ပြုကြသည်ဍ ပြင်သစ်အတွေးအခေါ်ပညာရှင် ဘလက်စ် ပက်ခက်စ် ပြောကြားသည်မှာ “တိတ်ဆိတ်ငြိမ် သက်နေသော ဤစကြာဝဋ္ဌာကြီးက ကျွန်ုပ်ကို ခြောက်လှန့်နေသည်”ဟူ၍ ပြောခဲ့သည်။ ဘုရားသခင် ထာ၀ရဘုရား စွန့်ပယ်ခြင်းက တိုင်းနိုင်ငံလူတို့အတွက် အဘယ်မျှလောက်ကြောက်ရွံ့ဖွယ် ဖြစ်လိမ့်မည်နည်း၊
“အို ကင်းစောင့်၊ ညဉ့်အမှုကား အဘယ်သို့နည်း၊ အိုကင်းစောင့် ညဉ့်အမှုကား အဘယ်သို့နည်း” (ဟေရှာယ ၂၁း၁၁)
၂။	ဒုတိယ၊ သမ္မာကျမ်းစာတော်က ငရဲမီးထဲနေ့ရောညပါ ပြင်းထန်စွာ လောင်ကျွမ်းခြင်း ခံရမည်ကို ဖေါ်ပြထားသည်။
သေခြင်းငရဲသည် တဖြည်းဖြည်းနှင့် နီးလာပြီဖြစ်သည်။ သမ္မာကျမ်းစာ၌ မိန့်တော် မူသည်ကား “အလွဲမယူကြနှင့်။ ဘုရားသခင်သည် မထီမဲ့မြင် ပြုခြင်းကို ခံတော်မမူ။ လူသည် မျိုးစေ့ကြဲသည်အတိုင်း အသီးအနှံကို ရိတ်ရ လိမ့်မည်” (ဂလာ ၆း၇)ဟု လာသည်။ တဖန်မိန့်တော်မူသည်ကား၊ “အသက်ရှင်တော်မူသေား ဘုရားသခင်၏လက်တော်သို့ ကျရောက်ခြင်း အမှု သည် ကြောက်မက်ဖွယ်သောအမှု ဖြစ်သတည်း၊ ငါတို့ဘုရားသခင်သည် လောင်သောမီးဖြစ်တော်မူ၏” (ဟေဗြဲ ၁ဝး၃၁၊ ၁၂း၂၉)
သေခြင်းငရဲသည် ဘုရားသခင်ထံတော်ပါးက လှည့်ထွက်သွားသောသူ၊ အသင်းတော်၊ ကယ်တင်ရှင်ထံလာလှည့်ထွက်သွားသောသူတို့အား စောင့်မျှော် နေပါသည်ဍ ကယ်တင်ရှင်ခရစ်တော်မပါဘဲ၊ သင်သည် ဝိညာဉ်ပျောက်နေ သောသူ ဖြစ်သည်။ ထိုအခါ ကိုယ်တော်က “သင်တို့ကို ငါအလျင်းမသိ၊ အဓမ္မအမှုကို ပြုသောသူတို့ ငါထံမှဖယ်ကြဟုထိုသူတို့အား အတည့်အလင်း ငါပြောမည်” (မဿဲ ၇း၂၃)။ ထို့နောက် “ငိုကြွေးခြင်း၊ အံသွားခဲကြိတ်ခြင်း ရှိရာအပြင်အရပ် မှောင်မိုက်ထဲသို့ နှင်ချခြင်းကို ခံရကြလကတ္တံ” (မဿဲ ၈း၁၂ç ၂၂း၁၃၊ ၂၅း၃၀)။
မိတ်ဆွေ၊ သင့်အားစိတ်နှလုံးသားပါလျှက် အနူးအညွတ်တောင်းဆိုခြင်း ဖြစ်တယ်။ သင့်အသက်တာ ကယ်တင်ခြင်းရရှိဖို့ အထူးဆုတောင်းပေးပါသည်။ သင် ဘ၀အသက်တာ မပြောင်းလဲသေးမှန်းသိပါတယ်။ ခရစ်တော်ထံ၌ စိတ်နှလုံးပါလျှက် ပြုပြင်ပြောင်းလဲလိုက်ပါ။ သို့မဟုတ် သင့်အတွက် မျှော်လင့်ရာမရှိပါ။ ထာ၀ရ မီးငရဲထဲ သင်နေ့ညဉ့်မပြတ် ပြင်းထန်စွာ ဝေဒနာခံစားရပါလိမ့်မည်။
“ဘုရားသခင် ကျွန်ုပ်ကို မချစ်ဘူးဆရာရယ်” ဟု သင်ပြောနိုင် ကောင်းပြောပါမည်။ ထိုသို့ဖြစ်နိုင်သည်။ အရှိအတိုင်းနေပြီး နောင်တရခြင်း မရှိပါက ဘုရားသခင် သင့်ကို မချစ်နိုင်ပါ။ ခရစ်တော်ရှေ့တော်မှောက်၌ ဂရုဏာတော် ကိုခံစားရဖို့ နောင်တရလျှက် တိုးဝင်ချဉ်းကပ်ပါ။ သမ္မာကျမ်းစာ မိန့်တော်မူသည်ကား၊
“ဘုရားသခင်၏သားတော်ကို ယုံကြည်သောသူအပေါင်းတို့သည် ပျက်ဆီး ခြင်းသို့မရောက်၊ ထာ၀ရအသက်ကိုရစေခြင်းငှါ ဘုရားသခင် သည် မိမိ၌တပါး တည်းသောသားတော်ကို စွန့်တော်မူသည့်တိုင်အောင် လောကီသားတို့ကို ချစ်တော် မူ၏။ (ယောဟန် ၃း၁၆)
၎င်းသည် အဖြေဖြစ်သည်ဍ ယေရှုကို စိတ်နှလုံးအကြွင်းမဲ့ချစ်ပါဍ အသင်းတော်သည် သင့်အဖို့ အမြဲတံခါးဖွင့်ထားသဖြင့် အချိန်တိုင်းသင်ပါနိုင်ပါသည်ဍ
ယေရှုဂရုဏာတော်ကို ရရှိခံစားလိုက်ပါဍ ယေရှုခရစ်တော်ကို သင့်နှလုံးသားထဲ ဖိတ်ခေါ်၍ အုပ်စိုးစေပါဍ ၎င်းသည် ကယ်တင်ခြင်း၏ နည်းလမ်းတစ်လမ်းတည်း ဖြစ်သည်ဍ ၎င်းကျမ်းချက်ကို နက်နဲစွာတွေးခေါ် စဉ်းစားကြည့်ပါဦး၊ သေသေချာချာ” ပြန်သွားကြ၊ ပြန်လာကြ”ဟူသော စကားနှစ်ခွန်းကို စဉ်းစားတွေးတောပါ။
“ဒုမာပြည်နှင့်ဆိုင်သော ဗျာဒိတ်တော်ကား၊ အို ကင်းစောင့်၊ ညဉ့်အမှုကား အဘယ်သို့နည်း၊ အို ကင်းစောင့် ညဉ့်အမှုကား အဘယ်သို့နည်း၊ ဟုစိရတောင်ပေါ်က ငါ့ကို ခေါ်တော်မူ၏။ ကင်းစောင့်ကလည်း နံနက်သည် လာ၏။ ညသည်လည်း လာ၏။ သင်တို့မေးမြန်းလိုလျှင်မေးမြန်းကြ ပြန်သွားကြ။ တဖန်ပြန်လာကြဟု ဆိုလေ၏” (ဟေရှာယ ၂၁း၁၁-၁၂)။
“ပြန်သွားကြ၊ ပြန်လာကြ”ဟူသော စကားခွန်းဖြင့် အဆုံးသတ်ခဲ့သည်ကို တွေ့ရသည်။ (ဟေရှာယ ၂၁း၁၂)။ ခရစ်တော်ထံပြန်လာပါ။ ခရစ်တော်ထံ ပြန်သွားပါ။ လက်ဝါးကပ်တိုင်တွင် စွန့်သောအသွေးတော်၌ သင့်အပြစ်ကို ဆေးကြောလိုက်ပါဍ ဓမ္မသီချင်း၌ သီကုံးထားသည်မှာ၊
(၁၈၂၆-၁၈၉၉ ၊ရောဘတ်လော်ရီသီကုံးသော “ယေရှုအသွေးတော်ကျူး”)
ဒေါက်တာ၊ ဒဗလျူ.အေခရစ္စဝေလ်၏ စာတမ်းကိုးကားခြင်းမရှိ၊ ဒီဒေသနာတော်ကို နိဂုံးမချုပ်လိုပါ။ (W. A. Criswell, Ph.D., Isaiah: An Exposition, Zondervan Publishing House, 1977, pp. 129-134).
အခြားသော ဒေသနာတော်၌ ဒေါက်တာခရစ္စဝေလ်ပြောကြားခဲ့သည်မှာ၊
ဒေါက်တာဂျော်ခ်ျဒဗလျူစာရူးစ် ပထမနှစ်ခြင်းအသင်းတော်၊ ဒါးလာဘ်မှ ကျွန်ုပ်၏ ရာထူးဆက်ခံသောသူက သူ့ဘ၀အသက်တာပြောင်းလဲခြင်းကို ပြော ကြားသည်မှာ လူထုပရိတ်သတ်ကြား၊ ကျွန်ုပ်တရားဒေသနာတော် နားထောင်ဖို့ အချိန်ယူထိုင်ခဲ့သည်။ တရားဟောဆရာက ခရစ်တော်အား အပြစ်သားများ၏ ဝိညာဉ်ကို ကယ်တင်ပေးဖို့ တောင်းဆိုခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်ကလည်း “ယေရှုသခင် ယခုတွင် ကျွုန်ုပ်သည် အမှောင်ထုထဲ ရှိနေသည်။ ကျွုန်ုပ်ဘာကိုမှ နားမလည်ပါ။ မှေင်သည်ဖြစ်စေ၊ လင်းနေသည်ဖြစ်စေ၊ သေသည်ဖြစ်စေ၊ အသက်ရှင်သည် ဖြစ်စေ၊ ကိုယ်တော်အလိုတော်အတိုင်း ပြုပြင်ပါမည်အကြောင်း လက်တော်သို့ အသက်တာဘ၀ကို ဆက်ကပ်ပါ၏။” (ညေိ Dမ. Tမကနအအ sငေိ) ကျွန်ုပ် အသက်တာကို ကယ်တင်ပါ” (ဃမငျတနူယ ငဘငိ.. စ. ၂၁၇).
ထိုသို့သော ဆက်ကပ်ခြင်းဖြင့် ဒေါက်တာထရူးစ်သည် အသက်တာ ပြောင်းလဲပြီး ကျော်ကြားသောတရားဟောဆရာဖြစ်နေပြီ။ ထိုနည်းလမ်းအတိုင်း သင်လည်း ကယ်တင်ခြင်းကိုရရှိနိုင်ပါသည်။ သင့် စိတ်နှလုံးသားထဲ ယေရှုကို ဖိတ်ခါ်လိုက်ပါ။ မှောင်သည်ဖြစ်စေ၊ လင်းသည်ဖြစ်စေ၊ သေသည်ဖြစ်စေ၊ အသက်ရှင် သည်ဖြစ်စေ၊ ကျွန်ုပ်အသက်တာအလိုတော်အတိုင်း ဆက်ကပ်လိုက် ပါ။ သင့်ဘ၀ အပြစ်ကို နောင်တရလျှက် ယေရှုထံတိုးဝင်ချဉ်းကပ်လိုက်ပါ။ ကရာနီကုန်းလက်ဝါးကားတိုင်ပေါ်က စီးကျသောအသွေးတော်ဖြင့် သင့်အပြစ်ကို ဆေးကြောလိုက်ပါဍ
ယေရှုခရစ်တော်၏အသွေးတော်ဖြင့် ဆေးကြောပြီး သင့်ဘ၀ အသက်တာ ထာ၀ရအသက်ကိုရရှိဖို့ရန် ဆွေးနွေးလိုပါက ဆွေးနွေးခန့်ဘက်သို့ ကြွလှမ်းလာခဲ့ပါ။ တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်သော အခန်း၌ ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ခြင်းကို ဒေါက်တာကေကန်က ဦးဆောင်ပေးပါလိမ့်မည်။ ယခုပင် သွားကြပါ။ ဒေါက်တာချန်မှ ဆွေးနွေးခန်းသို့သွားမည့်သူတို့အဖို့ ဆုတောင်းပေးပါသည်။ အာမင်။
ဒေသနာတော်မတိုင်ခင် မစ္စတာဘင်ဂျမင်ခင်ကိတ်ဂရိဖက်စ်မှ (၁၈၉၅-၁၉၈၀)ခုနှစ် ဂျွန်အာရ်ရိုက်သီကုံးသော “ယေရှုတပါးတည်းသာ” ဟူသေ ဓမ္မသီချင်းကို သီဆို ပေးပါသည်။
အို ကင်းစောင့် ၊ ညဉ့်အမှုကား အဘယ်သို့နည်း၊
၁။ ပထမ၊ သမ္မာကျမ်းစာတော်က တိုင်းနိုင်ငံအားလုံးကို ပြောဆိုနေသည်။ ဆာလံ ၉း၁၇ç ဒံယေလ ၅း၂၆-၂၇ç ရောမ ၃း၁၈ç ၁၁း ၁သက်သာ ၅း၃
၂။	ဒုတိယ၊ သမ္မာကျမ်းစာတော်က ငရဲမီးထဲနေ့ရောညပါ ပြင်းထန်စွာ လောင်ကျွမ်းခြင်း ခံရမည်ကို ဖေါ်ပြထားသည်။ ဂလာတိ ၆း၇ç ဟေဗြဲ ၁၂း၂၉ç ၁ဝး၃၁ç မဿဲ ၇း၂၃ç ၈း၁၂ç ၂၂း၁၃ç ၂၅း၃၀ç ယောဟန် ၃း၁၆